Daabacaadii koowaad ee joornaalka Khabiirada ee Cadastre - Geofumadas
Janaayo, 2008 cadastre, Maamulka Land
Iyada oo guul soo dhowaada nuqulka koowaad ee Journal of Hiberoamericanos Khubarada ku Cadastre, taas oo qabanaysa farqi weyn ee dhexdhexaad ah hispanoblante saabsan mowduuca cadastral ah, oo ka baxsan hadal ah, waa falanqaynta qiimo iyo hab habaynta.
Jariidadani waxay ku dhalatay iyada oo loo marayo hirgelinta Shirarka Ameerika ee 1988, halkaas oo inta ugu badan ee dadaallada loogu talagalay ka-dhimista saboolnimada ay ku dhasheen ayna taageersan yihiin soo jeedinta FIG ee 1996 qaabka 2014 Cadastre, kaas oo u arkaa in sanadkaan ay jiri doonto kaabayaal joogta ah ee maareynta cadawga. Waxaan tixgelinaynaa jiritaanka majaladdan qiimaha leh, iyo meesha ay ku dhalatay iyada oo ah hab lagu is dhaafsado macluumaadka iyo iskaashiga ka dhexeeya hay'adaha kala duwan ee gaarka loo leeyahay ama kuwa aan baahsaneyn ee ka shaqeeya goobtan; isla waqtigaas oo laga yaabo inay sii kordhiso muuqaalka Guddida Xoogga ee Joogtada ah ee Ibero-America CPCI.
Maxaa keenaya daabacaddaan markale?
Wareysi lala yeeshay Agaasimaha Guud ee Cadastre ee SpainInkasta oo wareysigu uu ahaa mid ballaadhan, suurtogalnimada in isbeddelku uu xadidnaa waxa laga yaabo in qaar ka mid ah fududeeyayaashu ay yiraahdaan "yar yartahay ama waxba" wax ku saabsan qaybaha la taaban karo ee sida iskaashiga loo wajaho laakiin maaha qalad in la noqdo aragti ah in dal loogu talagalay Latin America waa calaamad.
Ignacio Durán waxay ka hadlaysaa muhiimada ay leedahay isuduwidda hay'adaha cadawga ee Latin America, gabagabada la gaarey waa kuwaan:
1 Dhibaatooyinka ka jira Cadastres ee dalal badan oo Latin America ah ayaa sii xumeeyeen kala qaybsanaanta aqoonta u dhaxaysa hay'adaha.
2 Faafinta karti-xirfadeedku waxay u baahan tahay in la sameeyo dadaallo lagu hagaajinayo isku-duwidda hay'adaha.
3 Hawlgallo cusub ayaa dhawaan soo bandhigay bandhig
in, marka uu jiro isgaadhsiin fiican, horumar weyn ayaa loo samayn karaa isku-duwidda.
Waayo-aragnimo guul leh
Waxaan u maleyneynaa in qorshaha lagu diiwaangelinayo waayo-aragnimadu waa mid aad u wanaagsan, oo ka mid ah waxaan ku helnay warkan:
Taariikhda iyo horumarinta Kacaanka Ecuador, taas oo muujinaysa taariikhda yar iyo guulaha ugu muhiimsan ee barnaamijyada iyo mashaariicda la isku dayey in ay bixiyaan wax ka badan canshuur iyo xal sharci, dhaqan dhaqan.
Hirgelinta tignoolajiyada dejinta (GPS) ee loogu talagalay cadastiga miyiga ah ee Peru.
Ka dib marka la hirgeliyo meelaha qaarkood CEDDET, joornaalku wuxuu soo saarayaa natiijooyinka ugu muhiimsan ee qaar ka mid ah golayaasha dhowaan la dhisay.
Qodobka cadawga ee Real Estate, maqaal xiiso leh oo qalloociya iyada oo aan ugu dambeyntii maareynin in la liqo mowduucyada mowqifka ah ee magacabixinta liiska diiwaangelinta hantida maguurtada. Waxaa muhiim ah in baahida loo qabo jaangooynta ay muujinayso qaababka la qabsiga kakanaanta nolosha dhabta ah, laakiin ka sarreeya dhammaan xaaladaha degdegga ah ee waddamada in ay sameeyaan sharciyo rasmi ah oo la ixtiraami karo.
Ka qayb-galka shirkadda gaarka loo leeyahay ee cadawga, kooban laakiin isku dhafka dhibaatada ugu weyn ee ka baxsan bixinta adeega cadawga ama ka qaybgalka badan ee qaybaha gaarka ah ee maareynta cadawga.
Ugu dambeyntii, dib-u-eegis kooban oo ku saabsan daabacaadda koowaad ee koorsooyinka Xarumaha Goobta La-dagaallanka Mucaaradka ee leh fikrado iyo rajooyin ayaa la sameeyey.
Internetka adeega maamulka dadweynaha, e-maamulka iyo e-muwaadinimada.
Xafiiska Cadaaladda Waalidiinta oo ah aalad faafin ah oo loogu talagalay macluumaad cadastu.
Adeegyada Webka. Adeegyada Muuqaalka Mapka iyo wada shaqeeynta.
Shuruudaha farsamada ee OVC. Hirgelinta
Shuruudaha sharciga ah Shuruucda ilaalinta xogta.
Shuruudaha sharciga ah Shuruucda ilaalinta xogta. Isticmaalayaasha diiwaangashan DNI-ga elektarooniga ah. Kala qaybinta dhijitaalka ah iyo Qodobbada Macluumaadka Kacawada.
Post Previous«Previous Xakamaynta fog ee AutoCAD
Post Next Guddiga Cadawga Joogtada ah ee Isgaadhsiinta Mareykanka (CPCI)Next »